जनताकाे प्रश्न जनप्रतिनिधिकाे जवाफ, ताराखाेलामा प्रत्यक वडाहरूमा … ! – ebaglung.com
२०७६ जेष्ठ १५, बुधबार १५:२३	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
खगेन्द्र विश्वकर्मा, ताराखाेला २०७६ जेठ १५ । जनताकाे प्रश्न जनप्रतिनिधिकाे जवाफ, ताराखाेलामा प्रत्यक वडाहरूमा सन्चालन गने भएकाे छ । तर जनतालाई जानकारी छैन कार्यक्रम कहिले कहाँ ? हुन्छ भन्ने । ताराखाेला गाउपालिकाले जनतासंग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम तय गरेकाे छ । अर्थात जन गुनासाे जनप्रतिनिधि संग राखी विकासलाई प्रभावकारि बनाउने प्रयास देखिन्छ ।
कार्यक्रम जेष्ठ १४ गते वडा न १ मा संचालन गरिएको कार्यक्रममा जनगुनासाे अन्तरगत कुनै पनि कार्यक्रम हुनुपुर्व फाेन गर्ने पत्र नपठाउने जस्ता संचारकाे प्रभावकारिता नभएकाे गुनासाे अाएकाे वडान १ का वडा अध्यक्ष यमबहादुर श्रीषले बताए ।
यस कार्यक्रमकाे तालिका बुझ्न गाउपालिका सुचना प्रविधिक प्रमुख राेशन भण्डारीले कार्यक्रम १५ गते वडा न २ ,१६ गते ३ वडा ,१७ गते ४ वडा र १८ गते ५ वडामा हुने बताए । कार्यक्रम स्थान भने वडा कार्यालयमै हुने जनाए । हामीले समचार संकलन गर्दा यस कार्यक्रमका सुचना जनता समक्ष प्रभावकारी तरिकाले पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ ।
परिवर्तन रेडियोले मनायो नवौँ वार्षिकोत्सव : सबै नागरिकमा सूचना र सदस्यता बनाउने उदघोष !